Uyikhangela njani iPDF | Izixhobo zeNdaba
Umfanisi weLaura Torres | 12/05/2022 11:21 | ngokubanzi, software
Ngaba kufuneka ukhangele igama kwiPDF ende kodwa awazi ukuba uyenza njani? Ulibale ubuchule obusisiseko bokwenza ngesandla, ukuhamba iphepha ngephepha de ufumane igama, kukho indlela ekhawulezayo nelula yokukhangela iPDF.
Ngoko ke, kweli nqaku siza kuchaza inyathelo ngenyathelo ukukhangela njani iPDF ngomzekelo ukuze ungabi nangxaki yokufumana amagama kwiifayile ezinolu lwandiso.
Ukusukela ekubeni ibe yifomathi evulekileyo, amaxwebhu ePDF aqheleke kakhulu ngenxa yokuba gcina ingqibelelo yoyilo lwakho nokuba sisiphi isixhobo esijongwe kuso: ikhompyuter, i-smartphone, ithebhulethi, njl.
Ngamanye amaxesha kufuneka ukhangele igama kuxwebhu lwePDF ukuze uqinisekise inyani, ufumane ulwazi olubalulekileyo, okanye kuba nje ufuna ukwazi. Ngethamsanqa, olu lusebenza ngokukhawuleza kwaye kulula.
Ukukhangela amagama kwiPDF, siya kusebenzisa usetyenziso olusemthethweni lwe-Adobe, Inkampani eyenza ifomathi yePDF. I-Adobe Acrobat Reader DC yinkqubo yasimahla, ebandakanya injini yokukhangela esebenzayo, kwaye ikwangeSpanish, eyenza izinto zibe lula kuthi.
1 Ngaphambi kokuba uqalise: Khuphela inkqubo
1.1 Inyathelo lokuqala: Uyiphendla njani iPDF yegama okanye amagama.
1.2 Inyathelo lesibini: uphendlo oluthe ngqo
2 Fumana umbhalo kumaxwebhu amaninzi ePDF
2.1 Khangela kwiifayile ezininzi ngaxeshanye: amanyathelo ekufuneka uwalandele
3 Ndingajonga njani kwaye ndigcine iziphumo zophendlo?
Ngaphambi kokuba uqalise: Khuphela inkqubo
Ukuba awunayo nayiphi na inkqubo efakiweyo efunda iPDF, unokukhuphela I-Acrobat Reader DC kwiwebhusayithi yakho. Lumka, kuba ngokuzenzekelayo ikhuphela kwaye ifake i-antivirus yeMcAffee. Ukuba awunamdla, sukukhangela olu khetho.
Nje ukuba inkqubo ifakiwe, yiya ku imenyu Oovimba kwaye uvule iPDF apho ufuna ukukhangela khona. Uninzi lwexesha, ngenxa yoqwalaselo lwenkqubo, ifayile iya kuvula ngokuzenzekelayo ngeAcrobat Reader DC xa ucofa kuxwebhu.
Inyathelo lokuqala: Uyiphendla njani iPDF yegama okanye amagama.
Okulandelayo, kufuneka uye kwimenyu ephezulu Hlela kwaye nqakraza kukhetho search ecaleni kwebhayinotyhulasi isimboli. Enye indlela ekhawulezayo kukusebenzisa imiyalelo yebhodibhodi ukuba ukhetha:
cofa imiyalelo I-CTRL + F ukuba usebenzisa iWindows okanye I-CMD + F Ukuba usebenzisa iMac Ifestile yokukhangela iya kuvula apho unokuchwetheza igama ofuna ukulikhangela. Ukukhumbula lo myalelo, unokucinga ngegama lesiNgesi lokukhangela: "fumana", ngoko unobumba wokuqala wegama nguye ohamba ne-CTRL.
Inyathelo lesibini: uphendlo oluthe ngqo
Ukukhangela iinkcukacha ezithe vetshe, cofa CTRL + Shift + F kwiWindows okanye CMD + Shift + F kwiMac. Oku kuya kuvula i ukukhangela okuphezulu:
*"Shift" ibhekisa kwiqhosha olisebenzisayo ukuchwetheza unobumba omnye omkhulu, oquka i-ayikhoni yotolo oluphezulu. Isitshixo esingaphezulu nje kwe Ctrl.
Apha unokukhangela onke amaxwebhu ePDF kwifolda ethile, hayi kuphela incwadi eneenkcukacha yangoku. Unokukhangela amagama apheleleyo, amanqaku encwadi, kunye nezimvo. Kwakhona, kukho ibhokisi yokukhangela ukubonisa ukuba ufuna ukuthelekisa oonobumba abakhulu nabancinane.
Fumana umbhalo kumaxwebhu amaninzi ePDF
IAcrobat Adobe PDF iya phambili, unokukhangela amaxwebhu amaninzi ngexesha elinye!. Ifestile yokukhangela ikuvumela ukuba ukhangele amagama kumaxwebhu amaninzi ePDF ngaxeshanye. Umzekelo, unokukhangela onke amaxwebhu ePDF okanye uvule iiPotfoliyo zePDF kwindawo ethile. Kufuneka uthathele ingqalelo ukuba ukuba amaxwebhu afihliweyo (amanyathelo okhuseleko asetyenzisiwe), akanako ukufakwa kuphando. Ke ngoko, kuya kufuneka uvule la maxwebhu nganye nganye ukukhangela ifayile nganye ngokwahlukeneyo. Nangona kunjalo, amaxwebhu afakwe ngekhowudi njenge-Adobe Digital Editions ahlukile kulo mgaqo kwaye anokufakwa kwiqela lamaxwebhu okukhangela. Emva koko siya apho.
Khangela kwiifayile ezininzi ngaxeshanye: amanyathelo ekufuneka uwalandele
Vula i-Acrobat kwi-desktop (hayi kwibhrawuza yewebhu).
Yenza enye yezi ntshukumo zilandelayo.- Kwisixhobo sokukhangela, chwetheza umbhalo ofuna ukuwukhangela, uze ukhethe Vula uphendlo olupheleleyo ye-Acrobat kwi-pop-up menu.- kwibhokisi yokukhangela, chwetheza umbhalo ofuna ukuwukhangela.
Kule festile, khetha onke amaxwebhu ePDF. Kwi-pop-up menu engezantsi nje kokhetho, khetha khangela apho.
Khetha indawo kwikhompyuter yakho okanye kwinethiwekhi kwaye ucofe ukwamukela.
Ukucacisa iinqobo zokukhangela ezongezelelweyocofa Veza iinketho eziphambili kwaye ucacise iinketho ezifanelekileyo.
Cofa ku search.
Njengengcebiso, ngexesha lokukhangela, unokucofa kwiziphumo okanye usebenzise imiyalelo yebhodibhodi ukuskrola kwiziphumo ngaphandle kokuphazamisa uphendlo. Ukuba ucofa iqhosha Yima Ngaphantsi kwebar yenkqubela phambili, uphendlo lucinyiwe kwaye iziphumo zilinganiselwe kwiziganeko ezifunyenweyo ngoku. Ifestile yokukhangela ayivalwa kwaye uluhlu lweziphumo alucinywa. Ke ngoko, ukubona iziphumo ezingaphezulu, kufuneka uqhube uphendlo olutsha.
Ndingajonga njani kwaye ndigcine iziphumo zophendlo?
Emva kokwenza uphando kwifestile yokukhangela, iziphumo ziboniswa ngokulandelelana kwephepha, zihlanganiswe phantsi kwegama loxwebhu ngalunye olukhangelweyo. Into nganye kuluhlu ibandakanya igama lentsingiselo (ukuba likhona) kunye ne-ayikhoni ebonisa uhlobo lokwenzeka.
Tsibela kumzekelo othile kwiziphumo zophendlo. Inokwenziwa kuphela kwiiPDF ezizimeleyo.
-Yandisa iziphumo zophando, ukuba kuyimfuneko. Emva koko ukhethe umzekelo kwiziphumo zokuwujonga kwiPDF.
-Ukubona ezinye iimeko, cofa komnye umzekelo weziphumo.
Hlela iimeko kwiziphumo zophendlo. Khetha ukhetho lwemenyu Ucocekile ngezantsi kwefestile yokukhangela. Ungahlela iziphumo ngokubaluleka, umhla olungisiweyo, igama lefayile, okanye indawo.
Gcina iziphumo zophendlo. Ungagcina iziphumo zakho zokukhangela njengePDF okanye ifayile yeCSV. Ifayile ye-CSV yenziwe ngetafile, ukuze uyivule kufuneka uyenze ngeprogram ye-Excel. Ukugqiba, cofa i icon idiski kwaye ukhethe ukugcina iziphumo njengePDF okanye ugcine iziphumo njenge-CSV.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi lube luncedo kuwe, njengoko ubona, ukufumana amagama kwiPDF ngumsebenzi olula kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ukukhangela kwi-PDF
I-AnkerWork B600 ikhamera yewebhu yokusasaza kunye nokunxibelelana ngomnxeba [Jonga kwakhona]